Java ရေ မင့်ကိုမြင်တိုင်း ရှက်မိပါတယ်။ JPro.Zack — MYSTERY ZILLION
Java ရေ မင့်ကိုမြင်တိုင်း ရှက်မိပါတယ်။ JPro.Zack
December 2010 edited December 2010 in Java
အားလုံးဘဲမင်္ဂလာပါဗျာ။ ကျနော်က အရင်က java post လေးတွေတင်ဖူးတဲ့ JPro.Zack ပါ။ အရင်ဆုံးအားလုံးကို တောင်းပန်ချင်ပါတယ်။ ကျနော်က အားလုံးကို မျှော်လင့်ချက်ပေးသယောင်ယောင် အပေါ်ယံဘဲ ပါတဲ့ စာတွေရေးပြီး ပျောက်ပျောက်သွားသလို ဖြစ်သွားလို့ပါ။ အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကို လည်း ပြောချင်လို့ပါ။ကျနော်က အသက်၁၉နှစ်ပါ။ java ကို ၁၆ နှစ်ထဲက စပြီးထိတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော် ထိတွေ့ခဲ့တဲ့အထဲမှာ ကျောင်းမှာသင်ခဲ့ရတာက java နဲ့ gui လေးဆွဲပြီး jdbc လေးနဲ့ချိတ်တာလောက်အထိဘဲ သင်ခဲ့ဖူးတာပါ။ ကျန်တာကတော့ ကျနော့်ဘာသာ
၀ါသနာပါလွန်းလို့ လေ့လာခဲ့တာပါ။ ဒီလိုနဲ့ ကျနော် java ကိုလေ့လာရင်း ၂နှစ်ကြာတော့ အိမ်က စီစဉ်တာနဲ့ ကျနော် ဂျပန်ကို ထွက်လာခဲ့ရတယ်။ ကွန်ပျူတာလောက နဲ့လုံး၀ အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတာပေါ့ဗျာ။. ဒါပေမယ့် ကျနော် လေ့လာမှုကို မရပ်ခဲ့ပါဘူး။ simple database application လေးတွေရေးရာကနေ rich client app လေးတွေရေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ တဆင့်တက်ပြီး jsp,servelt,mysql နဲ့ server page လေးတွေရေးနိုင်ခဲ့တယ်။ ပထမဆုံးရတဲ့ လုပ်အားခထဲကနေ javafx စာအုပ်ကို ၀ယ်ပြီး javafx ရဲ့general concept ကို နားလည်ခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကျနော်အဖြစ်ချင်ဆုံး game programmer ဖြစ်အောင်ဆိုပြီး game တစ်ခုစရေးဖြစ်တယ်။
ကျနော်ဒီမှာ ကောလိပ်ဆက်တက်ဖို့ ကျောင်းရွေးတုန်းက ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ သင်တဲ့အစမ်းသင်ခန်းစာ မှာ shooting game ကို C# နဲ့ ဆရာကရေးပြသွားတာကို နမူနာယူပြီး ကျနော် လည်း java ဘက်ကနေ logic ယူပြီးရေးတယ်။ ဒီလိုမျိုး အမျိုးမျိုးလုပ်မိပေမယ့် ပြသနာက ကျနော် ဘယ်ဟာကို မှ မကျွမ်းကျင်ဘူးဆိုတာကို ကျနော်မသိခဲ့တာပါဘဲ။ ဘယ်လောက်ရှက်ဖို့ကောင်းလဲဆိုရင် game ရေးရင် graphic api ကို သုံးရတာ programmer တိုင်းသိပါတယ်။ ကျနော်လည်းသိပါတယ်။ ကျနော်က အဲ့ဒါကို မသုံးဘဲ ကိုယ့်နည်းကို်ယ့်ဟန်နဲ့ netbeans ထဲမှာ jlabel ထဲမှာ graphics တွေ (နောက်ခံ၊လေယာဉ်၊ရန်သူ) ထည့်၊ key event လေးဖမ်း၊ jlabel ရဲ့location ကို point object ယူပြီးတော့ collision စစ်နဲ့ thread အခု20 လောက် ပတ်ပေးလိုက်တော့ အဖြစ်တော့ game ၇ယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်။ အဲ့ဒါကို ဆက်ပြီးတော့ stage တွေတိုးဖို့၊ weapon တွေ upgrade လုပ်ဖို့ကျတော့................ jlabel နဲ့ဆက်လုပ်ဖို့က ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်တယ်ထားအုံး။ error ပေါင်းသောင်းခြောက်ထောင်နဲ့ သပွတ်အူကြီးဖြစ်မှာမလွဲပါဘူး။ ဒီတော့ ကျနော် စာပြန်ဖတ်ရတယ်။ အဲ့မှာ game ရေးဖို့အတွက်က Grphics API နဲ့ Thread ကို ပြန်လေ့လာရတယ်။ Sprite ကိုနားမလည်ရင် screen buffer နားမလည်ရင် 2d game တစ်ခုတောင် ချောချောမွေ့မွေ့ ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို သိလာတယ်။ ပြီးတော့ game ရဲ ့အသက် တစ်ခုဖြစ်တဲ့ sound အတွက် sound api နဲ့ joal(java open audio library) ကို မွှေနှောက်ရတယ်။ game တွေမှာ graphics တွေကို tile တွေဆက်ပြီးသုံးတာကိုလည်း ကျနော်လေ့လာမိတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကျနော် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရီချင်စိတ်ပေါက်လာတယ်။ ဆိုကရေးတီးပြောခဲ့သလိုပေါ့ဗျာ "ငါသိတဲ့အရာတစ်ခုထည်းဘဲရှိတယ်။အဲ့ဒါ ငါဘာမှမသိသေးဘူးဆိုတာကိုဘဲ"လေ။
ပြီးတော့ ကျနော်က ကျောင်းတက်ရင်း အလုပ်လုပ်နေရတာ ကျောင်းဆိုတာကလည်း အရင်ဆုံး ဂျပန်စာကို တစ်နှစ်တက်ရတာဆိုတော့ java နဲ့သိပ်မထိတွေ့ ဖြစ်တော့ ကျနော့်ကို အားကိုးပြီး မေးခွန်းတွေမေးထားကြတဲ့ အကို အမတွေကိုလည်း မကူညီနိုင်ခဲ့ဘူးဗျာ။ အလုပ်နဲ့ကျောင်းနဲ့ဘဲ တနေ့တနေ့ ပတ်ချာလည်နေလို့ပါ....
ပြောရရင်တော့ အရင်က ကျနော် ဘာကောင်မှမဟုတ်ဘဲနဲ့ ၀ မရှိဘဲ ၀ိလုပ်ခဲ့မိပါတယ်။ ၀န်ခံပါတယ်ဗျာ။ ၁၇ နှစ်သားတစ်ယောက်က မစဉ်းစားမဆင်ခြင်ဘဲ ကြွားဟန်ပါတဲ့ post တွေတင်ခဲ့မိပါတယ်။ တကယ်တော့ အခု ၁၉ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ကျနော် JPro.Zack ဟာ Java Pro မဟုတ်ပါဘူး။. Developer လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ Java ကိုစိတ်၀င်စားလွန်းလို့ လိုက်စားနေတဲ့ Amature ပါဘဲ။ အားလုံးလည်း ၁၇နှစ်အရွယ်က ကျနော့်လုပ်ရပ်တွေကို ခွင့်လွှတ်ပေးမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးတော့လည်း ကျနော်အပါအ၀င် java သမားတွေအားလုံး ကိုယ်သိသမျှတွေ မျှေ၀ကြတာပေါ့ဗျာ နော်......
၁၇ နှစ်နဲ့ ဒီလောက်လုပ်နိုင်တာ မဆိုးဘူးဗျ။ ဆက်သာ do ဗျာ။ အခုလောက် အခြေခံရှိရင် ရှေ့ဆက်တက်လမ်း အများကြီး ကောင်းသွားပြီ။ အားရင်လည်း blog.mysteryzillion.org မှာ java အကြောင်းတွေ ရေးပေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
Game ကိုစိတ်ဝင်စားရင်တော့ Java ကိုမသုံးပါနဲ့ C++ ကိုလေ့လာပါ အများအားဖြင့် Game Engine တွေမှာ C++ နဲ့အလုပ်လုပ်တာ အကောင်းဆုံးပါ။ Java ဟာ Limited ဖြစ်လွန်းပါတယ် သူ့တစ်ခုတည်း ကောင်းပေမယ့် Game မှာပရိုဂရမ်မာတစ်ယောက်တည်း အလုပ်လုပ်တာ မဟုတ်တဲ့အတွက် ကိုယ်သုံးချင်တာ သုံးလို့အဆင်မပြေပါ။
game လုပ်ချင်ရင်တော့ C++ နဲ့သာ ကိုင်။ game engine တွေလည်း အများကြီးရှိတယ်။ windows game ဆိုရင်တော့ Direct X Api ကိုလည်း သိဖို့လိုတယ်။ 3D တွေ မလုပ်ခင် သေးသေးလေးတွေ အရင်လုပ်ဗျ။ အကြီးကြီး ဖြစ်ဖို့မလိုဘူး။ တစ်ခုလောက် ပြီးအောင် အရင်ဆုံး လုပ်နိုင်ဖို့လိုတာ။ နောက်ပြီး java နဲ့ဆိုရင်တော့ Slick ကို သုံးလို့ရနိုင်တယ်။
အခုလို ကျနော့်ကို အားပေးတဲ့အတွက် ကိုစေတန်နဲ့ ကိုလူပျိုကြီးတို့ ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ အစ်ကိုတို့ပြောသလိုဘဲ ကျနော် လည်း c++ ကိုလုပ်ချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ PLATFORM တစ်ခုပေါ်ရောက်သွားရင် နောက်တစ်ခုမကူးချင်သလိုပေါ့ဗျာ။ JAVA ကိုရေးလက်စဖြစ်နေတော့ C++ ဆီသွားဖို့က တွန့်ဆုတ်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော် JAVA နဲ့ GAME DEVELOPMENT CONCEPTS တွေပိုင်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့ သွားဖြစ်အောင်ကိုသွားမှာပါ။ ပြီးတော့ ကျနော်တက်ဖြစ်မယ့်ကောလိပ်မှာလည်း GAME PROGRAMMING ကို မေဂျာအနေနဲ့ယူထားပြီး ကျောင်းမှာလည်း C,C++,C# အကုန်သင်ရမှာမို့ ကိုယ့်တပိုင်တနိုင်ကို တော့ JAVA နဲ့ပဲ ဆက်သွားချင်သေးလို့ပါ။ အခုလို ကျနော့်ကို အားပေးပြီး ကြိုဆိုဖေးမ ကြတဲ့အတွက် အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ....MZ.EDU မှာလည်း အားရင် ကျနော်ရေးပါ့မယ်။
ဆက်ကြိုးစားထားပေါ့အစ်ကိုရယ် ကျွန်တော်လည်း မသိတာရှိရင် မေးရတာပေါ့ အစ်ကို
Good Friend You are more smarter than us.In actual I hate to write codes.And I am notapatient guy to be happy with JDE and some other high level programming.But I have to .
I also want to learn from you please share us friend.
You are greater than me with your age 19.
Although I graduated in computer science,
I can read and modify the Codes only! notaDeveloper.
I'm very appreciate you.
Try on bro.
I also appreciate you. I also want to beagame developer. I request you to try on. please write on MZ to learn all of member .